ShweMinThar: ရာသီမလာခင်ဖြစ်တာတွေ (၂)
ရာသီမလာခင် တပါတ်၊ နှစ်ပါတ်လောက်မှာ ရင်ပြည့်မယ်၊ ခေါင်းကိုက်မယ်၊ စိတ်မူပြောင်းလဲမယ်၊ တခြား စိတ်အခြေအနေတွေ မတူတာဖြစ်လာမယ်။ လတိုင်းလိုလို အဲလိုဖြစ်နေရင် Premenstrual Syndrome (PMS) ရာသီမလာခင် ဖြစ်ချင်တာတွေလို့ ခေါ်တယ်။ အမျိုးသမီး ၈၅% မှာ တမျိုးမဟုတ်တမျိုး ခံစားကြရတယ်။ တချို့မှာ ဆိုးတာတွေအထိ ခံစားရတယ်။ အလုပ်မှာလဲ အဆင်မပြေ၊ အိမ်နေလဲ အခန့်မသင့်၊ လင်နဲ့ မယား စကားများအထိ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒီလိုအထိဖြစ်ရင်တော့ Premenstrual dysphoric disorder (PMDD) လို့ သတ်မှတ်တယ်။
• Cravings ချဉ်ခြင်းတပ်
ရာသီလာရင် တချို့ကြ ဘာမှမစားချင် ဖြစ်တယ်။ တချို့က စားချင်တာ ရွေးလာတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှ ချဉ်ချင်းတပ်တာ မဟုတ်ပါ။ မိန်းကလေးတွေ အများဆုံး ကြိုက်တတ်တာတွေဆိုတာ ရှိတယ်။ ပုံထဲကလို (ချော့ကလက်-မာဖင်) မျိုးကို မြန်မာမလေးတွေက အချဉ်ထုပ်လောက် သိပ်မမက်ကြပါ။
• Acne ဝက်ခြံထွက်
ရာသီချိန်မှာ ဝက်ခြံထွက်တတ်တယ်။ အဖြစ်များတယ်။ အပျိုပေါက်တွေမှာသာ ဖြစ်တာ မဟုတ်ပါ။
• Pain နာခြင်းအမျိုးမျိုး
- Menstrual cramps ဗိုက်နာ၊
- Back pain ခါးနာ၊
- Tender breasts ရင်သားနာ၊
- Joint pain အဆစ်နာ။
• Mood Swings စိတ်မူပြောင်း
တချို့မှာ စိတ်မူ မတူတာဖြစ်လာကြတယ်။ ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်မှန်း မှန်းလို့မရတတ်ဘူး။ စိတ်တိုမယ်။ ဒေါသထွက်မယ်။ ငိုချင်တယ်။ စိတ်ဓါတ်ကျမယ်။ စိုးရိမ်စိတ်ကဲမယ်။ တချို့ မေ့တတ်တယ်။ အာရုံစိုက်ရတာ ခက်တတ်သေးတယ်။
• Who Gets PMS? ဘယ်လို မိန်းကလေးတွေ ဖြစ်သလဲ
ရာသီလာသူတိုင်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ အသက် ၂ဝ-၄ဝ ကြား အဖြစ်များတယ်။ အသားမဲတွေက ပိုပြီး ချဉ်ခြင်းတပ်တယ်။ အဖြူမတွေက စိတ်မူပြောင်းတာ များတယ်။ လူပိုဝတယ်။ အပျိုပေါက်တွေထက် အပျိုရွယ်တွေက ပိုဖြစ်တယ်။ ၃ဝ ကျော်မှ ဖြစ်တာ ပိုဆိုးတယ်။
• How PMS Affects Other Conditions ကျန်းမာရေးကို သက်ရောက်စေနိုင်တယ်။
- Asthma and allergies ပန်းနာ၊ (အလာဂျီ) ရှိသူတွေ ရာသီနဲ့ဆက်ပြီး ရောဂါထတတ်တယ်။
- Depression and anxiety စိတ်ဓါတ်ကျနေသူတွေ စိုးရိမ်စိတ်ကဲသူတွေက အဲလိုအချိန် ပိုဆိုးကြတယ်။
- Seizure disorders အတက်ရောဂါရှိနေသူ တက်တတ်တယ်။
- Migraines (မိုင်ဂရင်း) အမူးရောဂါရှိနေရင် မူးလာတတ်တယ်။
• What Causes PMS? ဘာကနေဖြစ်စေသလဲ
အသေအခြာ မပြောနိုင်ပါ။ ဟော်မုန်းတွေ အပြောင်းအလဲကြောင့်ဖြစ်မယ်။ ရာသီမလာခင် တပါတ်လောက်ဟာ Estrogen (အီစထိုဂျင်) နဲ့ Progesterone (ပရိုဂျက်စတီရုန်း) တွေ နည်းနေချိန်ဖြစ်တယ်။
• PMS or Something Else တကယ်ဘဲ ရာသီနဲ့ဆိုင်တာ ဟုတ်ရဲ့လား
- Perimenopause သွေးဆုံးချင်လို့လား၊
- Depression or anxiety စိတ်ရောဂါလား၊
- Chronic fatigue syndrome နာတာရှည် အားနည်းရောဂါလား၊
- Thyroid disease လည်ပင်းကြီးရောဂါလား၊ သိထားဘို့က ရာသီလာချိန်နဲ့ ကိုက်ဖြစ်တာမှာ ဒါလို့ခေါ်ရတယ်။
• Diagnosing PMS ဟုတ်-မဟုတ် သေခြာအောင်
Symptom Tracker လုပ်ထားသင့်တယ်။ ခံစားရတာတွေက ဘယ်ရက်တွေမှာလဲ၊ ရာသီမလာခင် ၅ ရက်အတွင်း ဟုတ်သလား၊ ရာသီလာပြီး ၄ ရက်အတွင်း ပျောက်သွားသလား၊ ရာသီလာနေတုံး ၃ ရက်မှာ ခံစားရတာဟုတ်ရဲ့လား၊
• When to SeeaDoctor ဆရာဝန်ပြဘို့လိုသလား
Premenstrual dysphoric disorder (PMDD) ဆိုတာဖြစ်ရင် ပြရမယ်။ ဒါတွေက ရာသီနဲ့သာဆိုင်ဖြစ်ပြီး ခံစားရတာတွေက အတော်ဆိုးတယ်။ အော်ရတဲ့အထိ၊ ငိုယူရတဲ့အထိ၊ အိပ်ရေးပျက်တဲ့အထိ၊ အလုပ်ပျက်ရတဲ့အထိ၊ သတ်သေချင်စိတ် ပေါ်တတ်တဲ့အထိ၊ PMS ကို ကုသနည်းတွေနဲ့ဘဲ PMDD တွေက ပျောက်တာ များတယ်။
• Exercise ကိုယ်လက် လေ့ကျင့်ခန်း
Exercise လုပ်ရင် Mood စိတ်မူပြောင်းတာ နဲ့ Fatigue အားယုတ်တာတွေ သက်သာစေတယ်။ ဖြစ်မှ လုပ်ရတာ မဟုတ်ပါ။ တနေ့ မိနစ် ၃ဝ လုပ်ပါ။ တပါတ် ၅ ရက် လုပ်ပါ။ တခါတလေ ပြင်းပြင်းထံထံ လုပ်လဲ ရတယ်။
• Diet Rich in B Vitamins ဗီတာမင်ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအသောက်
အမျိုးသမီး ၂ဝဝဝဝ ကို ၁ဝ နှစ်တာ လေ့လာတော့ Vitamin B ဗီတာမင် ဘီ ကြွယ်ဝတာ စားခိုင်းတာက သက်သာစေတယ်။ ဗီတာမင် ဘီ ၁ များတာတွေက ဝက်သား နဲ့ အစေ့အဆံတွေ၊ ဗီတာမင် ဘီ ၂ များတာတွေက ကြက်ဥနဲ့ နို့ထွက်အစာတွေ ဖြစ်တယ်။ ဗီတာမင် ကြွယ်ဝတဲ့အစာတွေ စားစေတာက ဗီတာမင် ဆေးပေးတာထက် ပိုထိရောက်တယ်။
(ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်) ကြွယ်ဝတဲ့ ဆန်လုံးညို၊ ပေါင်မုံ့ညို တွေမှာ (ဖိုက်ဘာ) ပါတယ်။ သကြားဓါတ် မျှစေတယ်။ စိတ်မူပြောင်းတာ နဲ့ ချဉ်ခြင်းတပ်တာတွေ သက်သာစေမယ်။ ဗီတာမင် ဘီ ၁ နဲ့ ၂ တွေ ကြွယ်ဝတယ်။
• Foods to Avoid ဒါတွေ မစားနဲ့
- Salt ဆားများတာ၊
- Caffeine (ကေဖင်း) များတာ၊
- Sugar သကြားများတာ၊
- Alcohol အရက်ပါတာ။
• Stress Relief စိတ်ဖိအား မများစေနည်း
PMS တွေကနေ စိတ်ဖိအား၊ စိုးရိမ်စိတ် နဲ့ စိတ်တိုတာတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ယောဂနည်း၊ တရားထိုင်နည်း၊ အနှိပ်ခံတာ၊ စာရေးတာ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ရောရောနှောနှောနေတာတွေ လုပ်သင့်တယ်။
• OTC Drugs ဆေးသောက်ပါ
Aspirin, Ibuprofen နဲ့ Naproxen ဆေးတွေထဲက တမျိုးမျိုးကို သောက်ပါ။ ၂၈-၂-၂ဝ၁၂ နေ့ အီတလီ သုတေသနအသစ်တခုအရ ဗီတာမင် ဒီ တကြိမ်ထဲ များများပေးရင် ရာသီလာလို့ခံစားရတာတွေ သက်သာစေတယ်လို့ ဆိုတယ်။ ထုံးစံအရ ဗီတာမင် ဒီ ကို တနေ့မှာ ၄ဝဝဝ ယူနစ်သာသောက်ရတယ်။ အခုစမ်းသပ်မှုမှာ ယူနစ် ၃ သိန်းအထိ သောက်ခိုင်းတယ်။
• Hormone Treatments ဟော်မုန်းသုံးကုသနည်း
Birth control pills ဟော်မုန်းပါ ကိုယ်ဝန်တားကနေ မျိုးဥထွက်မှာကို တားပေးမယ်။ GnRH agonists Lupron နဲ့ Nafarelin ဒါမှမဟုတ် Danazol ဆေးလဲသုံးတယ်။
• Other Medications တခြားဆေးနည်း
Mood swings ဆိုးရင် PMDD ဖြစ်နေရင် စိတ်မကျဆေးတွေကို သုံးနိုင်တယ်။ SSRIs ဆေး အမျိုးအစား သုံးတာ များတယ်။ ၁ဝ-၁၄ ရက်ကြာ သောက်ရတတ်တယ်။
- Paroxetine HCI (Paxil CR)
- Nefazodone (Serzone) နဲ့
- Clomipramine (Anafranil) တွေဖြစ်တယ်။
Anti-anxiety medications စိုးရိမ်စိတ်အတွက်ဆေး (Xanax, Buspar) နဲ့ Diuretics ဆီးသွားဆေး (HCTZ, Aldactone) တွေလဲ သုံးနိုင်တယ်။
• Supplements တခြားလိုအပ်တာတွေ
- Folic acid (400 mcg)
- Magnesium (400 mg)
- Vitamin E (400 IU)
- Calcium (1,000 mg to 1,300 mg)
• Herbal Extracts (ဟာဘယ်) ဆေး
လက်တွေ့သက်သေမပြနိုင်ပေမဲ့ Chasteberry, Black cohosh နဲ့ Evening primrose oil တွေက အကျိုးများစေတယ်။
- Premenstrual syndrome (PMS) ရာသီမလာခင် ဖြစ်ခြင်တာတွေ http://health-adult-reading.blogspot.com/2012/01/premenstrual-syndrome-pms.html - Menstrual mood swings ရာသီလာခြင်းနှင့် စိတ်ပြောင်းလဲမှု http://health-adult-reading.blogspot.com/2012/01/menstrual-mood-swings.html
- Menstrual Suppression ရာသီမလာအောင်နှိမ်ခြင်း http://health-adult-reading.blogspot.com/2012/01/menstrual-suppression.html
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ (၂၃-၃-၂ဝ၁၂ )
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ - ﻿ရာသီမလာခင်ဖြစ်တာတွေ (၂)